21 Mgbe anyị jisiri ike si n’ebe ha nọ pụọ wee banye n’ụgbọ mmiri, anyị gawara n’akwụsịghị akwụsị wee rute Kọs, ma n’echi ya, anyị bịaruru Rods, sikwa n’ebe ahụ gaa Patara. 2 Mgbe anyị hụrụ otu ụgbọ nke na-aga Finishia, anyị banyere ya wee gawa. 3 Mgbe anyị bịarutere n’ebe anyị nọ na-ahụ agwaetiti Saịprọs,+ anyị gafeere ya n’akụkụ aka ekpe ma garuo Siria,+ wee kwụsị na Taya, n’ihi na n’ebe ahụ ka ụgbọ ahụ gaje ibutusị ibu o bu.+ 4 Anyị chọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs wee chọta ha ma nọrọ n’ebe a ruo ụbọchị asaa. Ma site n’ike mmụọ nsọ+ ha gwara Pọl ugboro ugboro ka ọ ghara ịkpa ụkwụ na Jeruselem. 5 Ya mere, mgbe anyị nọchara ụbọchị ndị ahụ, anyị pụrụ wee malite njem anyị; ma ha niile, ma ndị inyom ma ụmụaka, dupụrụ anyị ruo ọbụna ná mpụga obodo. Anyị gburu ikpere n’ala+ n’ụsọ osimiri wee kpee ekpere 6 ma sị ibe anyị ka e mesịa,+ anyị wee banye n’ụgbọ, ma ha onwe ha laghachiri n’ebe obibi ha. 7 Anyị wee banye n’ụgbọ mmiri na Taya ma bịarute na Tọlemeis, anyị kelekwara ụmụnna ma nọnyere ha otu ụbọchị. 8 N’echi ya, anyị pụwara ma bịarute Sesaria,+ anyị wee banye n’ụlọ Filip onye na-ezisa ozi ọma, onye bụ́ otu n’ime ndị ikom asaa ahụ,+ anyị nọnyekwaara ya. 9 Nwoke a nwere ụmụ agbọghọ anọ ndị na-amaghị nwoke, ndị na-ebu amụma.+ 10 Ma ka anyị nọrọ ebe ahụ ruo ọtụtụ ụbọchị, otu onye amụma aha ya bụ Agabọs+ si na Judia gbadata, 11 o wee bịakwute anyị ma chịrị ájị̀ Pọl, kee onwe ya agbụ, ụkwụ na aka, sị: “Mmụọ nsọ kwuru, sị, ‘Otú a ka ndị Juu ga-eke onye nwe ájị̀ a agbụ+ na Jeruselem ma nyefee+ ya n’aka ndị mba ọzọ.’” 12 Ma mgbe anyị nụrụ ihe a, ma anyị ma ndị ebe ahụ malitere ịrịọsi ya arịrịọ ike ka ọ ghara ịgbago+ Jeruselem. 13 Mgbe ahụ, Pọl sịrị ha: “Gịnị ka unu na-eme site n’ịkwa ákwá+ na ime ka obi ghara isi m ike?+ Ka obi sie unu ike na adị m njikere ọ bụghị naanị ịbụ onye a ga-eke agbụ kamakwa ịnwụ+ na Jeruselem n’ihi aha Onyenwe anyị Jizọs.” 14 Mgbe a na-enweghị ike ime ka ọ gbanwee obi ya, anyị kwetara wee sị: “Ka uche+ Jehova mee.” 15 Ma mgbe ụbọchị ndị a gasịrị, anyị kwadebere maka njem ahụ wee malite ịgbago Jeruselem.+ 16 Ma ụfọdụ n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs, bụ́ ndị si Sesaria,+ sokwa anyị jee, ka ha wee kpọrọ anyị bịakwute otu nwoke anyị ga-anọ n’ụlọ ya dị ka ọbịa, ya bụ, otu onye a na-akpọ Minesin, onye Saịprọs, otu n’ime ndị mbụ ghọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs. 17 Mgbe anyị banyere na Jeruselem,+ ụmụnna ji ọṅụ nabata anyị.+ 18 Ma n’echi ya, Pọl so anyị gakwuru Jems;+ ndị okenye niile nọkwa ya. 19 O wee kelee ha ma malite ịkọrọ ha n’ụzọ zuru ezu+ ihe Chineke mere n’etiti ndị mba ọzọ site n’ozi ya.+ 20 Mgbe ha nụsịrị ihe a, ha malitere inye Chineke otuto, ha gwakwara ya, sị: “Nwanna, ị na-ahụ ọtụtụ puku ndị kwere ekwe e nwere n’etiti ndị Juu; ha niile na-anụkwara Iwu ahụ ọkụ n’obi.+ 21 Ma ha nụrụ asịrị a kọrọ banyere gị na ị nọ na-akụziri ndị Juu niile nọ n’etiti ndị mba ọzọ ka ha hapụ iso Mozis,+ na-agwa ha ka ha ghara ibi ụmụ ha úgwù+ ma ọ bụ ije ije dị ka omenala ndị gbanyesiri mgbọrọgwụ ike si dị. 22 Gịnịzi ka a ga-eme banyere ya? Ka o sina dị, ha ga-anụ na ị bịarutewo. 23 Ya mere, mee ihe a anyị na-agwa gị: Anyị nwere ndị ikom anọ ndị ka bu nkwa ha kwere Chineke. 24 Kpọrọ ndị ikom+ a gaa ka gị na ha mee onwe unu ka unu dị ọcha dị ka iwu kwuru, kwụọkwa ụgwọ ihe ha mefuru,+ ka e wee kpụọ ha isi.+ Onye ọ bụla ga-esikwa otú a mara na o nweghị ihe dị na asịrị ahụ a kọọrọ ha banyere gị, kama na ị na-eje ije n’ụzọ kwesịrị ekwesị, na gị onwe gị na-edebekwa Iwu ahụ.+ 25 Banyere ndị kwere ekwe, ndị si n’etiti ndị mba ọzọ, anyị ekpebiwo, anyị ezipụwokwa ozi, na ha kwesịrị izere ihe e ji chụọrọ arụsị àjà,+ na ọbara+ na anụ a nyagburu anyagbu+ na ịkwa iko.”+ 26 N’echi ya, Pọl kpọọrọ ndị ikom ahụ gawa, ya na ha wee mee onwe ha ka ha dị ọcha dị ka iwu kwuru.+ Ha wee banye n’ụlọ nsọ iji mee ka a mara ụbọchị ole fọrọ+ ka ha debechaa onwe ha ọcha dị ka iwu kwuru, ruo mgbe a ga-achụ àjà+ maka onye nke ọ bụla n’ime ha.+ 27 Ma mgbe ụbọchị asaa+ ahụ na-aga izu, ozugbo ndị Juu si Eshia hụrụ ya n’ụlọ nsọ, ha malitere ime ka ìgwè mmadụ ahụ dum gbawa aghara,+ ha wee jide ya, 28 na-eti mkpu, sị: “Ndị Izrel, bịanụ nye aka! Onye a bụ nwoke ahụ nke na-akụziri ndị nọ n’ebe niile ihe ka ha na-emegide+ ndị ala anyị na Iwu ahụ, na-emegidekwa ebe a, nke ka nke, ọ kpọbatara ọbụna ndị Grik n’ime ụlọ nsọ, o merụwokwa ebe nsọ a.”+ 29 N’ihi na ha hụburu ya na Trọfimọs+ onye Efesọs n’ime obodo, ma ha nọ na-eche na Pọl akpọbatawo ya n’ụlọ nsọ ahụ. 30 E wee mee ka oké ụzụ daa n’obodo ahụ dum,+ ndị mmadụ gbakọtakwara; ha wee jide Pọl ma dọkpụrụ ya pụọ n’ụlọ nsọ ahụ.+ Ozugbo ahụkwa, e mechisịrị ụzọ. 31 Ka ha na-achọkwa igbu ya, ozi rutere ọchịagha nke ìgwè ndị agha ntị na Jeruselem dum nọ n’ọgba aghara;+ 32 ozugbo ahụ, ọ kpọọrọ ndị agha na ndị isi ndị agha gbadakwuru ha.+ Mgbe ha hụrụ ọchịagha+ ahụ na ndị agha ya, ha kwụsịrị iti Pọl ihe. 33 Mgbe ahụ, ọchịagha ahụ bịara nso wee jide ya n’aka ma nye iwu ka e jiri agbụ ígwè abụọ kee ya;+ o wee jụwa ase onye ọ bụ na ihe o mere. 34 Ma ụfọdụ n’ime ìgwè mmadụ ahụ malitere iti otu ihe ná mkpu, ndị ọzọ na-etikwa ihe ọzọ.+ Ya mere, ebe ya onwe ya na-enweghị ike ịmata ihe ọ bụla doro anya n’ihi oké aghara ahụ, o nyere iwu ka a kpọta ya n’ogige ndị agha.+ 35 Ma mgbe o ruru n’elu ebe e si arịgo n’ụlọ ahụ, ọnọdụ jọrọ njọ nke na ndị agha ahụ buuru ya eburu n’ihi ihe ike ìgwè mmadụ ahụ na-eme; 36 n’ihi na ìgwè ndị Juu nọgidere na-eso ha, na-eti mkpu, sị: “Kpọrọnụ ya pụọ!”+ 37 Ka a na-agakwa iduru ya baa n’ogige ndị agha ahụ, Pọl sịrị ọchịagha ahụ: “M̀ nwere ike ịgwatụ gị okwu?” O wee sị: “Ì nwere ike ịsụ Grik? 38 Ọ́ bụghị gị bụ onye Ijipt ahụ nke kpaliri ndị mmadụ imegide ọchịchị,+ tupu ụbọchị ndị a, nke dukwaara puku ndị ikom anọ ndị ji mma daga baa n’ala ịkpa?” 39 Pọl wee sị: “N’eziokwu, abụ m onye Juu,+ onye Tasọs+ dị na Silishia, nwa amaala nke obodo a ma ama. Ya mere ana m arịọ gị, nye m ikike ka m gwa ndị a okwu.” 40 Mgbe o nyesịrị ya ikike, Pọl guzo n’elu ebe ahụ e si arịgo n’ụlọ feere+ ndị ahụ aka. Mgbe ebe niile dara jụụ, ọ gwara ha okwu n’asụsụ Hibru,+ sị: